မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Hunan Zhonggu သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
ငါထပ်မံလျှောက်ထားရန်သင့်ကုမ္ပဏီမှနမူနာ (အခမဲ့) ပေးနိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံးသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM / ODM ကိုလက်ခံပါသည်။ သင်၏အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းမန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်ပါ။
မင်းရဲ့အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များသည်အော်ပရေတာအတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်။ စက်များရရှိပြီးနောက်သင်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းများကိုသာလိုအပ်သည်၊ ကုန်ပစ္စည်းများအပြည့်ဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့နောက်ရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းနိုင်တဲ့ရေခဲသေတ္တာလိုပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များသည်မော်ဂျူးလ်ပုံစံများဖြစ်သည်။ အခက်ခဲဆုံးမှာအစိတ်အပိုင်းများကျိုးနေသောကြောင့်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုနည်းပညာအားဖြင့်လမ်းပြပြီးနောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုသင်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများ။ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့ လာရောက်၍ သင်အလုပ်သင် ၃ ရက်သင်တန်းပေးနိုင်သည်။ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အချို့နိုင်ငံများတွင်အထူးထောက်ခံမှုရှိသည်။ ဒေသခံ ၀ န်ဆောင်မှု၊ သငျသညျအသေးစိတျကိုသိလိုလျှင်, pls ။ မင်းရဲ့လုပ်ငန်းကတ်ကိုငါ့ကိုပေးပါ။ / ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်? အရောင်းမန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်ဖို့အီးမေးလ်လိပ်စာပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များသည်အော်ပရေတာအတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ စက်များရရှိပြီးနောက်သင်သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းများကိုသာလိုအပ်သည်၊ ကုန်ပစ္စည်းအပြည့်ဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့နောက်ရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်တွေကိုရောင်းနိုင်တဲ့ရေခဲသေတ္တာလိုပဲ။
မင်းရဲ့စီးပွားရေးကဒ်ရနိုင်မလား။ / ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်? သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာ, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဗီဒီယိုများပေးပို့ရန်သို့မဟုတ်အဝေးမှကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းမန်နေဂျာကိုစီစဉ်နိုင်သည်။
ငါစက်နှင့်အတူလိုဂိုစိတ်ကြိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်စေသလား ဘယ်လောက်လဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအရောင်းရဆုံးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ OEM / ODM ကိုလက်ခံသည်။ LOGO သည်ပြproblemနာမဟုတ်သော်လည်းပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးရန်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပို့လျှင်ပိုကောင်းသည်။